ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပြည်သူ့ကောင်စီ၏အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံခြား သား ဦး ရေ (၁၀၃၇) ဦး ရှိ | ဧရာဝတီ Irra Wadi
ဧရာဝတီ Irra Wadi
Toward Peaceful Global Society
← Burmese react to Fortify ‘persecution’ report
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ (ကိုကိုလင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်) →
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပြည်သူ့ကောင်စီ၏အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံခြား သား ဦး ရေ (၁၀၃၇) ဦး ရှိ	Posted on February 28, 2014	by irrawadi မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငံ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်လာမှုကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် နိုင်ရေး အတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင် ရွက်လာခဲ့သည်။အစဦး`၌ နှစ်စဉ်(၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်း ခန့်သာ သုံစွဲခဲ့ သော်လည်း၁၉၆၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ် သိန်း( ၈၀) သုံးစွဲ လာခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းအင်အား ထောင်နှင့်ချီ၍ ခန့် အပ် တာဝန်ပေးအပ်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည်။
ရခိုင်တိုင်းလုံခြုံရေး နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော ရခိုင်တိုင်း လုံခြုံရေနှင့် အုပ် ချုပ်ရေကော်မတီ၏ သမိုင်းအကျဉ်း စာမျက်နှာ (၄၀)တွင်- နိုင်ငံခြားသားဝင် ရောက်နေ ထိုင်ခြင်း အတွက် ကာကွယ်မှုအဖွဲ့(မတဖ)အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပြီး အခြေစိုက်စခန်း (၁၄) ခု၊ ဖွင့်လှစ်စစ်ဆေး လျှက် ရှိကြောင်း၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်တိုင်း`၌ နိုင်ငံခြာသား (၁၁၉၂ ) ဦးရှိ၍ အခွန်ငွေ (၅၆၆၀၀)ကျပ် ရရှီ သည် ဟုဖေပြသည်။
တဖန် ၁၉၇၅ – ၇၆ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ ဒုတိယ (၃)လ ပတ် အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည် နယ်`၌ နိုင်ငံခြားသား ပေါင်း (၁၀၃၇) ဦရှိပြီး အသက်(၁၂) နှစ် မှ (၁၈) နှစ် အထိ ကလေး (၁၅၂) ဦး ၊ (၁၂ နှစ်အောက် ကလေး (၇၇) ဦးရှီသည် ဟုဖေါ် ပြသည်။
အထက်ပါအထောက်အထားများအရ ရခိုင်ပြည်နေထိုင်သော မွတ်ဆလင် များသည် ဘင်္ဂလား ဒေရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူများ မဟုတ်ဘဲ ရှေး မြန်မာ ရခိုင်ဘုရင် လက်ထက်ကတည်းကပင် နေထိုင် လာခဲ့ သော မြန်မာ နိုင်ငံသား၊တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေသည်မှာ သံသယမရှိ ပေါ်လွင်ထင်ရှား နေပါသည်။
အထပ်ပါအထောက်အထား ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင် များသည် နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ဘဲ တနေရာမှ တနေ ရာ သို့သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်း၊ နယ်ကျော်တယ် ဆိုပြီး ထောင်ချခြင်း၊ကန့်သတ်ချုပ် ချယ်၊ နိုင်ငံခြား သား များအသုံးပြုရသော ပုံစံ (၄) ဖြင့် သွားလာရခြင်းသည် စစ်အစိုးရ က လူ့ အခွင့်ရေးချိုး ဖေါက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.	← Burmese react to Fortify ‘persecution’ report
Top Posts & Pages	ဥပဒေအသက်မရှိသော ၁၉၈၂ - ခုမြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။	Search ရှာရန်
Recent Posts	တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (PBUH) ဖွားမြင်သည့်နေရာအား ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်း မလွတ် သည့်အတွက် ဖြိုချ ဖယ်ရှားရန် ဆော်ဒီ အာဏာ ပိုင် များ စီစဉ်နေ
ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးဝင်းမြိုင်၊ Fortify Rights ဘယ်သူ့ ကိုယုံမလဲ
ဒူချီရာတန်းတွင်ရခိုင်လုံထိန်းများကရိုဟင်ဂျာ ၂၀ ဦး အား သတ် ဖြတ် အလောင်း ဖျောက် ဆောင်း ပါး၊ New York Times
တရုတ် နိုင်ငံမှာ မွေးစ ကလေးငယ်တွေ လူကုန်ကူးခံရတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပိုခက်လာ
၁၇နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းနဲ့ လိင် ဆက် ဆံဖို့ကြိုးစား သူ၊ အခေါင်းထဲ အိပ်ပျော် သွားလို့ ဖမ်းမိခဲ့
ဒုချီးရားတန်းစုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာ သမ္မတကိုပို့
Myanmar Invited for UN Peacekeeping by Nambiar, UN Silent on Law
Arson attack again to Du Chee Ya Tan village of Maung Daw
‘Rohingya innocent of Jalan Alor shooting’
Myanmar: International aid cut, blamed on work with Rohingya
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ (ကိုကိုလင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပြည်သူ့ကောင်စီ၏အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံခြား သား ဦး ရေ (၁၀၃၇) ဦး ရှိ
သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်ကို မေးချင်သော မေးခွန်းများ နှင့် Fortify Rights အစီရင်ခံစာ
Barak Hussein Obana
မြန်မာနိုင်ငံသို့ မိတ်ဆွေတဦး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်….
“The Burmese military has clearly embarked onapolicy of ridding the country of ethnic Rohingyas
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃) …
ဥပဒေအသက်မရှိသော ၁၉၈၂ – ခုမြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာသမိုင်း အထောက်အထား စာတမ်း : – In Respect Of The Fact The Local Islam’s Inhabitants Within Rakhine State Are Native Race And Citizen Of Myanmar Under Law : in English and Burmese version …
၁၉၇၃ ခုနှစ်သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်ခံစဉ်ကရိုဟင်ဂျာ အပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၃) မျိုးရှိခဲ့ …
RNDP ရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားမှု့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတိပေးတာနဲ့ လုံလောက်ပြီလား
ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်းစာတမ်း …
The Myanmar parliament block amendments to 1982 Citizenship Law
ရိုဟင်ဂျာ အက်သနစ် ဟုတ် မဟုတ် | စိုင်းလတ်
Blog Stats	1,861 hits
Visitors’ Countries	ZaiGadgets_CountryCounter_getcode("18CEDrO");
ဧရာဝတီ Irra Wadi	Createafree website or blog at WordPress.com.